၂၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ လူ့လောကထဲသို့ ကျနော့်ကို မွေးဖွါးသန့်စင် ပေးလိုက်သော အနန္တဂိုဏ်းဝင်မိဘနှစ်ပါးအား ရှိသုံးခါခိုးရိုကျိုးပါ၏ (သောက်ပြီးရင် ကန်တော့ဘို့ မေ့သွားမှာစိုးလို့ :P) ။ မွေးနေ့ကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆင်နွှဲဘို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။ အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် စိတ်ကူး အိမ်မက်တို့ကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော့်စိတ်ကူးတွေ အကောင်အထည် ပေါ်တဲ့ နေ့ဟာ ဒီနေ့(ပထမဆုံးအကြိမ်) ပါပဲခင်ဗျာ။ ကျနော့်မွေးနေ့ကို လာရောက်အားပေး ကြတဲ့ ကိုကိုမမအားလုံးကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ညီတော်မောင် အချစ်တုံးလေး “မောင်ကျန်ရစ်”ရဲ့ ကျနော့်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါ။
ငါနဲ့အတူ တလိမ့်ကောက်ကွေး စီးမျောခဲ့ကြပြီး
အတ္တဆိုတာ တစ်ယောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးတယောက် ဖြည့်ခြင်းပဲ။
တူတူစားသုံးခဲ့ကြတာ မေ့နိုင်စရာမှ မဟုတ်တာ။
မင်းမိသားစုရဲ့ မြင့်မိုရ်လို ထူမတ်ထားတဲ့မင်း
ငါ့အတွက် သူငယ်ချင်းလည်းဟုတ် အစ်ကိုဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။
(၂၃) ဆိုတဲ့ မှတ်တိုင်တခုပေါ့…
ဒီနေ့ ဒီရက်မှစပြီး ကံကောင်းခြင်းတွေစီးနင်းရင်း
ကမ္ဘာတစ်ခု မင်းဖန်တီးနိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်း။
ငါဆိုတဲ့ မင်းသူငယ်ချင်း မင်းညီတစ်ယောက်
မောင်နှမအရင်းပမာ ချစ်ခင်ရသော အစ်မတော် “အစိမ်းရောင်မိန်းကလေး” ရဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင် ကဗျာလေးပါ။
နှစ်ပေါင်း တစ်ရာ့နှစ်ဆယ် တည်ပါစေ...
“ကျနော့်မွေးနေ့ကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ ကိုကိုမမများအားလုံးကို Record လုပ်ထားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရှိစုမဲ့စုလေးနဲ့ မွေးနေ့ပွဲလုပ်လိုက်ရသဖြင့် အညာသား ဆီမှာ လုံချည်တစ်ထည်သာကျန်ပါတော့ကြောင်း၊ မွေးနေ့ပွဲပြီးတာနဲ့ ကိုကိုမမများ ဆီသို့ တစ်အိမ် တစ်ရက် လိုက်လံစားသောက်မှာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်ခင်ညာ”
(ဓာတ်ပုံတစ်ချို့အား http://myanmarbamar.blogspot.com/ မှ ရယူပါသည်။)
This entry was posted on Saturday, June 21, 2008 and is filed under အမှတ်တရများ . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
Happy Birthday to you--A Nyar Tar..
အမိအဖကို မမေ့တဲ့သားတစ်ယောက် ကောင်းတာမွန်တာတွေပဲ ဒီအသက်ရပါစေဗျာ...
ယခု ၂၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကျန်းမာပျော်ရွှင် အဆင်ပြေနိုင်ပါစေဗျာ....:D
June 21, 2008 at 3:27 AM
Happy Birthday ကိုညာ ကိုကျန်စစ် ရဲ့အစ်ကိုတော် ဆိုတော့ တော်တော် အိုနေပြီလားလို့အခုမှ ၂၃ ပဲ ရှိသေးတာကိုး) ကောင်း၏ ကောင်း၏ မွေးနေ့ မှစ ဘ၀လမ်းခရီးကို အခက်ခဲမရှိ ဖြောင့်ဖြူးစွာလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေဗျာ လိုတာတွေအကုန်ပြည့်ပါစေလို့တိုတိုပဲဆုတောင်းပေးတော့မယ် မွေးနေ့ ရှင်ကဘာလို ချင်လည်း သိမှမသိနိုင်တာ ဟားဟား ။ ကျွေးထားတာတွေ အများကြီးပဲ သောက်စရာကတော့ ပါစယ်ပါနည်းနည်းဆွဲသွားတယ် ကျေးဇူးဗျို့။
Happy 23rd Birthday ! ပါအညာသားရေ။ “အနန္တဂိုဏ်းဝင်မိဘနှစ်ပါးအား ရှိသုံးခါခိုး ရိုကျိုးပါ၏ (သောက်ပြီးရင် ကန်တော့ဘို့ မေ့သွားမှာစိုးလို့ :P) “ ဆိုတော့ မောင်ကျန်ရစ်ပြောတဲ့ “လက်မောင်းသွေးဖောက် သစ္စာရေသောက်” တာလား? (ဒါမှမဟုတ့်) Black, Red, Jack တွေ သောက်တာလား?
June 21, 2008 at 6:24 AM
happy birthday.all the best.
မွေးနေ့ပွဲလာတယ်ကွာ.... လက်ဆောင်တော့မပါဘူး.... :)
လိုအပ်သောအချိန်များမှာ တောင်းတသောဆုများ ပြည့်ပါစေဗျာ...:P
ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင် ပျော်ရွှင်အေးချမ်းသောဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
မုန့်တွေကျွေးလို့ ပိုက်ပိုက်ကုန်ရင် အိုးဝေမှာ လာစားနော်
အဖေအမေကို ချစ်တဲ့ သားလိမ္မာလေး
အများအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်
မွေးနေ့ရှင် ဧည့်ခံတဲ့ ၀ိုင် နဲ့လက်ဖက်ကို သုံးဆောင်ပြီးသကာလ ... မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးရရင်တော့
ဆန္ဒတွေ ပြည့်စုံ ... လိုချင်တာတွေ ရပါစေ ..။
သူငယ်ချင်းရေ ...၂၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်သည်အထိ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင် အဆင်ပြေနိုင်ပါစေဗျာ....:)
~~~ ဇောင်း ~~~
Happy Birthday ပါဗျာ။ မွေးနေ့တိုင်းမှာ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ
:D hApPy BiRtHdAy BrO ! :)
မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ.!
မိဘကိုလုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့ သားကောင်းရတနာလေး ဖြစ်ပါစေ။ (:
တိုက်! :P ( ဗော်ကာ+၀ိုင်+ရှန်ပိန်+ Green Lable=AK 47)
ယခုမွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာသော မွေးနေ့သည့်တိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော လမ်းခရီးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ...
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ အကိုရေ. :D
အခုမှစနောင်နှစ် ၁၀၀ ကျော်တိုင် အဆင်ပြေပါစေ။ဘ၀
ကြီးလုပ်ကြတာပေါ့ ဟဲဟဲ :P)
၂၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်...
မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ ။ ၂၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှစ၍ နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၂၀တိုင် အေးချမ်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
မွေးနေ့မှာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်စေဗျာ ၊၊ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ပါစေ ..(ညီ)အညာသားလေးရေ
ယနေ့၂၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်သည်အထိ လိုအင်ဆန္ဒများ တလုံးတဝ တည်း ပြည့်စုံနိုင်ပါစေဗျာ..။
အညာသားရေ စားစရာ သောက်စရာတွေက များတော့
ဘာကို သောက်ရမှန်းမသိကြောင်း ၊ သို့ပေမယ့်
မွေးနေ့ဆုတောင်းတော့ ပေးသွားကြောင်း မွေးနေ့မှသည်
နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘ၀မှာ အခက်အခဲ အနဲဆုံးနဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေကြောင်း
မိဘအား ကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့ သားလိမ္မာ ဖြစ်ပါစေကြောင်း
ညီအစ်ကို ၂ ယောက်လဲ ဒီထက်ပိုပြီး ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေနိုင်ကြပါစေကြောင်း
ဆုတောင်းပေးသွားပါကြောင်း ။ ။
June 22, 2008 at 2:54 AM
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ..အခုမှစနောင်နှစ် ၁၀၀ ကျော်တိုင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ညီလေးရေ :)
ကြေးအိုးအ၀တွယ်သွားတယ်..ကိတ်မုန့်တော့ အကုန်ကိုစားသွားတယ် အဟီးး
မွေးနေ့မှစတင်၍ နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင်အောင်
စိတ်ချမ်းသာမှုအစစ်အမှန်ဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတယ်နော်...
hi do u want to rellay exchange to my bllog
i am myat thu hein 12 years old http://kingmth.blogspot.com/